UVERA JIMENEZ (KTLA) WIKI BIOGRAPHY, UBUDALA, UMYENI, UMVUZO, UMTSHATO - IINDABA
UVera Jimenez (KTLA) Wiki Biography, ubudala, umyeni, umvuzo, umtshato
UVera Jimenez Vick Biography
UVera wazalelwa eMexico nge-5 kaDisemba ngo-1965, ke uphantsi kweSagittarius kwaye ubambe ubuzwe baseMelika kunye neMexico- uyathandwa ngokuba yintatheli yemozulu kwisikhululo se-KTLA.
Nangona wazalelwa eMexico, uVera wakhulela eLos Angeles kuMazantsi eCalifornia xa abazali bakhe bafudukela apho eneminyaka emithathu- kunqabile ukuba akhankanye usapho lwakhe kuba unxibelelana nemicimbi yakhe yobuqu kwiiLikes zakhe zokugcina Ungumntwana ongatshatanga, kwaye uxele indlela utata wakhe nonina abenze ngayo yonke into ukuze baphile ubomi obumnandi.
Emva kwematriki evela eBolsa Grande High School, wabhalisa kwiYunivesithi yaseCalifornia State, eLong Beach, kwaye wafumana isidanga se-bachelor kwizifundo zonqulo, ngelixa wayefunda kwiKholeji yoLuntu yaseSanta Ana.
Umsebenzi kushishino losasazo
Nangona uVera wayecebe ukusebenza kwicandelo lezonyango, kamva wathandana nobuntatheli kwaye watshintshela kusasazo emva kokufunda izifundo zobuntatheli apho wadibana noCharles ‘Bud’ Omncinci owayesele eyinxalenye yomzi mveliso. Wagqiba kwelokuba anikezele ngexesha lakhe kwi-journalism, kwaye waqhubeka nokufunda phantsi kweengcebiso zikaNjingalwazi uTerry Bells.
uphawu lwesixhobo angie harmon
UVera waqala ukusebenza njengomfundi kwisikhululo sikanomathotholo iKIK-FM, emva koko wenza umsebenzi wakhe wokuqala kusasazo lwezithunzi. Akazange ahlale apho ixesha elide, njengoko wayefudukela kwisikhululo se-KFWB-AM emva koko waya kwi-KNX-AM, apho waphucula khona izakhono zakhe, ebasebenzela njengentatheli yakhe yezithuthi zomoya.
Waqala ukuvela kumabonakude njengoochwephesha bezemeteor xa wayesebenzela isikhululo seKABC-TV - wafuduka esuka apho waya eKCBS-TV eLos Angeles, waya nakwiMeteorology eMississippi State University, wafumana isatifikethi. Ngo-Agasti 2009.
Ukusukela ukuqala kwakhe umsebenzi ukuza kuthi ga ngoku, uVera usebenze kwizikhululo zeTV ezininzi, kubandakanya iABC, NBC, CNN, Univision, kunye neTelemundo. Uyinxalenye yesikhululo se-KTLA ukusukela ngoJanuwari 2010, kwaye ngoku usebenza njengemeteorologist yakhe ephezulu- unokubonakala nge-6 kusasa, ngo-6: 30, ngo-10 ngorhatya nange-11 ngokuhlwa, ngexesha lomsebenzi wakhe, uVera une-Emmy ezimbini, abathathu baphumelela iGolden Mic , kunye neeMbasa ezintathu zeGolden Toran.
Ukongeza ekubeni sisazi ngemozulu, uVera ukwanguye nendawo yokutyela ebizwa ngokuba yiHermosa Beach Fish Shop - uyasebenza kwindawo yaseSouth Bay nanjengoko eyinxalenye yeRedondo Beach Rotary kunye neHarmosa Beach Women’s Club. Ulilungu lamaGumbi oRhwebo kuzo zombini iRedondo Beach kunye naseHarmosa Beach.
Ubomi bomntu kunye nomtshato
UVera uthetha ngobomi bakhe xa ethanda ukwahlula ishishini lakhe kunye nemicimbi yobuqu. utshatile UBrian Herlihy - UBrian ngusomashishini, yena kunye naye ongumnini weHermosa Beach Fish Shop. Ukujonga iifoto ezifakwe ngabo kwiakhawunti yabo ye-Instagram, esi sibini siphila ubomi obonwabisayo kunye.
Ithunyelwe ngu UVera Jimenez Vula NgoLwesine, Februwari 14, 2019
UJohn krasinski snl tom brady
Ukuthandwa kunye nokuzonwabisa
UVera unomdla kumculo ukusukela ebuntwaneni kwaye uye wafunda ukudlala ipiyano. Uyazithanda ezemidlalo kwaye ngamanye amaxesha udlala i-basketball- uyayithanda kakhulu imovie kwaye uchitha ixesha lakhe lasimahla esitya iipopu kunye nokubukela umdlalo ohlekisayo. UVera ngumlandeli omkhulu wokuhamba. Kodwa ngenxa yomsebenzi wakhe onzima kakhulu, kunqabile ukuba ahambe-uhlala esebenzisa ixesha lakhe lokuzilolonga, ngelixa esenza nokucamngca kunye neyoga.
Isiteshi se-KTLA esiyi-5 sisikhululo se-TV esidibeneyo se-CW esinelayisensi eLos Angeles, eCalifornia- isikhululo eso sesosasazo seTribune Broadcasting esiyinxalenye yeTribune Media Inkampani. Izitudiyo zayo zibekwe eSunset Boulevard eHollywood, ngelixa umthumeli wayo enokufumaneka ngaphezulu kweNtaba iWilson. Isikhululo siyafumaneka kwi-DirecTV kunye ne-Dish Network eMntla Melika kunye nababoneleli ngeentambo ezithile kwizixeko ezininzi eziseMazantsi-ntshona e-US nase Canada.
I-KTLA yasekwa ngo-Septemba ka-1947 kwaye ke sisikhululo sokuqala se-TV esinephepha-mvume kwezorhwebo kwinxalenye esentshona ye-US, ngelixa yayisasaza umboniso wayo wokuqala ngoJanuwari 22, 1947 -nezibhengezo LA's Own Own kunye nesikhululo saseHometown Station.
Imizuzwana nje embalwa ukusuka apha # lamarathon2018 # ktla5iindaba #skechers #ziintso pic.twitter.com/2lxQpS6224
-Vera Jimenez (@veraktla) Ngomhla wamashumi amabini anesibhozo ku-Matshi 2018
Inkangeleko kunye nexabiso elifanelekileyo
UVera okwangoku uneminyaka engama-53 ubudala. Unenwele ezinde ezimdaka kunye namehlo ansundu, zii-5 zenyawo i-8 ye-intshi (1.73 m) ubude, inobunzima malunga ne-137lb (62 kg), kwaye amanani akhe abalulekileyo angama-35-25-35.
Ngokomthombo osemthethweni, iiasethi zeVera ezikhoyo ziqikelelwa ngaphezulu kwe-400, 000 yeedola kwaye ziyanda ngokuthe chu.
yiba thompson channel 7 iindaba
Ubukho beendaba zosasazo
UVera uyasebenza kumaqonga amajelo asekuhlaleni-wasungula iakhawunti yakhe ye-Twitter ngo-Epreli 2010 kwaye waqokelela ngaphezulu kwe-16,000 yabalandeli kunye nee-tweets phantse amaxesha angama-27,000 ukuza kuthi ga ngoku. yakhe I-Instagram Iakhawunti ilandelwa ngabantu abangaphezu kwe-18,000, ngelixa ilayishe malunga nemifanekiso engama-4 500- inephepha likaFacebook elilandelwa ngabantu abamalunga ne-19,000.
UVera wammisela Ijelo le-Youtube Ukusukela nge-13 kaFebruwari 2012, inababhalisile abangaphezu kwama-200 kunye neembono eziphantse ezingama-25,000 kuzo zonke iividiyo ezingama-81 ezidityanisiweyo.
Umhla wokukhutshwa kwe-yoru ukhaliphile
Umthi weedola 4th kaJulayi
angel umthi ophawuleka ngefilimu